Maitiro Ekuenzanisa Balance Kuwanikwa vs. Kuchengetedza Kuedza | Martech Zone
Maitiro Ekuenzanisa Balance Kuwanikwa vs. Kuchengetedza Kuedza
Chishanu, May 8, 2020 Chishanu, May 8, 2020 Douglas Karr
Paunenge uchiedza kuwana mutengi mutsva, ndinotenda zvechokwadi chipingamupinyi chikuru chaunofanira kukunda kuvimba. Mutengi anoda kunzwa sekunge uchasangana kana kupfuudza zvinotarisirwa kune chako chigadzirwa kana sevhisi. Munguva dzakaoma dzehupfumi, izvi zvinogona kutonyanya kuita chinhu sezvo tarisiro dzakatochengetedzwa pamari yavanoshuvira kushandisa. Nekuda kweizvi, iwe ungangoda kugadzirisa ako kushambadzira kuyedza kuti utsamire pane ako aripo vatengi.
Kuchengeta hakugone kuve zano rako rese, kuburikidza. Kuchengetedza kunogadzirira kambani inobatsira uye zvinoreva kuti uri kubudirira mukupa kukosha kune vatengi vako. Nekudaro, kana usiri kuwana vatengi vatsva zvinowirirana, pane zvakaderera.
Vatengi vako vakakosha vanogona kukusiya uchinetseka kana vaenda.
Boka rako rekutengesa rinogona kunge risingashande mukuyedza kuvhara uye kubuda mukuita.
Iwe unogona kusakwanisa kukura zvakanyanya bhizinesi rako.
Mune ino infographic kubva kuFirst Data, ivo vanopa mamwe manhamba, mazano, uye matekinoroji anoenderana nezvose zviri zviviri nzira dzekuwana nekuchengetedza. Kupfuura zvese, ivo vanopa nhungamiro pakuenzanisa kushambadzira kwako uye kuedza kwekutengesa pakati pemaitiro maviri.
Kuwana vs. Kuchengetedza Statistics
Inofungidzirwa kuti ingangoita 40% yemari kubva kune ecommerce bhizinesi kunouya kubva Dzoka Vatengi.
Mabhizinesi ane 60 kusvika 70% mukana yekutengesa kune iripo mutengi achienzaniswa ne 20% mukana nokuti itsva mutengi.
Sekureva kwevamwe nyanzvi, bhizinesi rakamisikidzwa rinofanirwa kutarisisa nezve 60% yezvishambadziro zviwanikwa pane kuchengetedzwa kwevatengi. Mabhizimusi matsva vanofanirwa kupa yakawanda yenguva yavo pakutenga, hongu.
Kuenzanisa Kuwana vs. Kuchengetedza
Kuedza kwako kushambadzira kunogona kuona kuti unowana zvakanaka sei kana kuchengetedza vatengi. Pane nzira shanu dzakakosha dzekuisa kune ese ari maviri:
Fungisisa pane Hunhu - kukwezva vatengi vatsva uye kukurudzira varipo kuti vagare nebasa rakasarudzika uye zvigadzirwa.
Shingairira Vatengi Vazvino - ita rako riripo mutengi base unzwe uchikosheswa nekuvakumbira kuti vaparadzire izwi nezvako kuburikidza nepamhepo ongororo.
Gamuchira Kutengesa Kwepamhepo - Shandisa midhiya kuti ubatanidzane nevatengi vatsva uye yakanangisa kushambadzira yeemail kuti ubatanidzane neyaivapo.
Wongorora Yako Yevatengi Base - svetuka mu data rako kuti uone kuti ndeupi wevatengi vako varipo akakosha kubatisisa uye asiri iwo.
Wana Wako - Tumira manotsi akanyorwa nemaoko kumutengi aripo kushambadza zvinobudirira zvinobatsira kuvaka izwi rakasimba remuromo.
Nezve Chekutanga Dhata
Chekutanga Data ndiye mutungamiri wepasirese mukubhadhara uye tekinoroji yezvemari, achishandira zviuru zvemabhizimusi emari uye mamirioni evatengesi nemabhizinesi mune dzinopfuura nyika zana
Shoutem: Iyo Inonyanya Kushanda Nhare mbozha App Development Platform
Wedzera Chokunze Podcast Kudya kune Yako WordPress Saiti Saiti